Amiirka Dubai oo loo haysto afduubka gabdho uu dhalay | Dhacdo
Home Wararka Maanta Amiirka Dubai oo loo haysto afduubka gabdho uu dhalay
Amirad Latifa ayaa Booliska Ingiriiska ka codsatay in dib loo bilaabo baaritaanka afduubka 20 sano ka hor loo gaystay walaasheed ka weyn Amirad Shamsa. Latifa oo qudheeda xabsi guri lagu hayo ayaa sheegtay inay gacan ka gaysan doonto baadigoobka walaasheed. Labadan gabdhood waxaa dhalay Amiirka Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum.
Shamsa oo 18 jir ahayd ayaa la waayay sanadkii 2000, iyadoo wixii ka dambeeyay-na aanay jirin cid raq iyo ruuxba aragtay gabadhaasi. Maanta haddii ay nooshahay waa 39 jir.
Toddobaadkii hore muuqaal ay teleefanka gacanta ku soo duubtay Latifa ayaa shaashadaha lagu arkay, iyadoo markaasi sheegeysa sida uu aabaheed laheyste uga dhigay, ka dib isku daygeedii guuldareystay, ee ay dooneysay inay ku baxsato sanadkii 2018.
Wixii xilligaa ka dambeeyay Qaramada Midoobey ayaa weydiisatay Dowladda Emirate-ka Carabta in ay keenaan cadeymo muujinaya bal inay Latifa nooshahay.
Bishii August ee sanadkii 2000, qiyaastii laba bilood ka dib markii ay ka baxsatay hoyga aabaheed uu ku leeyahay Longcross Estate ee dalka Ingiriiska ayaa Shamsa si khasab ah waxaa Helicopter looga qaaday Cambridge, iyadoona loo duuliyay dalka Faransiiska, halkaasoo looga qaaday diyaarad gaara oo dib loogu celiyay Dubai.
Warqad ay gacanta ku qortay Latifa oo saaxiibadeed ay u gudbiyeen Booliska Cambridge ayay Dowladda Ingiriiska kaga codsatay in tallaabo ficil ah ay qaadaan, si ay u caawiyaan walaasheed.
Booliska Cambridge ayaa baaritaan lagu baadigoobayo Shamsa bilaabay sanadkii 2001, balse baaritaankaasi ayaa dhicisoobay, ka dib markii loo diiday in Dubai ay taggaan.
Sheikh Mohammed bin Rashid ayaa xiriir dhow la leh Dowladda Ingiriiska, wuxuuna saaxiib la yahay Boqorada UK, Elizabeth II. Rashid ayaa sidoo kale ka mid ah dadka dhulalka waaweyn ku leh dalkaasi.
Dowladihii is xigxigay ee dalkaasi ayaa Emirate-ka Carabta u arkayay saaxiib ganacsi iyo mid istiraatiijiyadeed.
Previous articleXoogaga PSF oo gaaray deegaano ka tirsan Buuraha Cal Miskaat (SAWIRRO)
Next articleDil ka dhacay Magaalada Beledweyne iyo raggii gaystay oo baxsaday